Isishwabulo in English with contextual examples
Results for isishwabulo translation from Xhosa to English
Owahlulelana nesela uthiya umphefumlo wakhe; Uyasiva isishwabulo, angaxeli.
UYehova akasayi kuvuma ukumxolela; wosuka uqhume umsindo kaYehova nekhwele lakhe kuloo ndoda, silalephezu kwayo sonke isishwabulo esibhaliweyo kule ncwadi, alicime uYehova igama layo phantsi kwezulu.
umbingeli womfungisa umfazi lowo isifungo sokuzishwabulela, athi umbingeleli kumfazi, UYehova makakwenze isishwabulo, nesithuko phakathi kwabantu bakowenu, ngokuthi uYehova alintshwenyise ithanga lakho, asidumbise isisu sakho;
hypnoses (English>Norwegian)gabas is so ugly (English>Tagalog)antiche case (Italian>English)extendidas (Spanish>Burmese)ಮನ (Kannada>English)opening prayer for born again (English>Tagalog)allborth (Welsh>Thai)sekretess (Swedish>English)sup mrchožravý (Czech>French)niobio (Spanish>English)bulundurmalısınız (Turkish>Slovak)kohtuullisella (Finnish>English)coorgi (Kannada>English)scientific name of upo (Tagalog>English)jenki (English>Polish)munemiskuupäeva (Estonian>Polish)pencegahan (Indonesian>Persian)paorooro (Maori>English)lisätä (Finnish>Czech)suya inbam (English>Tamil)venn mynd (English>German)texians (English>Portuguese)essay diwali for kid (English>Gujarati)bangladesh 3x (English>Bengali)scartoffie (Italian>Portuguese)